Nhau - Hebei Tomato 2019 zviitiko zvekuvaka zveboka
Hebei Tomato 2019 mabasa ekuvaka eboka
Hebei Tomato akamisikidza zviitiko zvakakura zvekuvaka zveboka zvegore kubva Nyamavhuvhu 9 kusvika 13, 2019.
Kuti upfumise nguva yevashandi yekurerutsa, kurerutsa kumanikidzwa kwebasa, kusimudzira kutaurirana nekutaurirana pakati pevashandi, simbisa kubatana kweboka uye simba repakati, uye kuronga chiitiko chisingakanganwike chekuvaka boka muHebei Tomato.
Pazuva rekutanga, ndege yakanonoka nekuda kwemamiriro ekunze. Sezvineiwo, takasvika zvakanaka.
Pazuva rechipiri, takatora mota yekunzira-nzira tichipinda nemunzvimbo yehuswa yeHulunbeier isina nyika yemurume, takasvika panzvimbo dzakakwirira dzeRwizi rweMozhgrad, tikaravira "Mabiko Ese Masere" eMabiko neFortune Fortunes. Mumasikati, ndakashanyira Erguna National Wetland, ndichipfuura neBlack Forest Island, sango renguruve, sango reeucalyptus, chitsuwa cheshiri, Kang Street, wetland maruva egungwa uye dzimwe nzvimbo dzakanaka. Iyo yakajeka midzi rwizi inoyerera chinyararire, uye iyo yakakombama mvura yakakomberedza meadow uye mahombekombe Makwenzi ane huswa uye girini. Svika paGenhe manheru uye kuravira iyo yemuno yakasarudzika wok stew. Mushure mekudya kuzere, gara mukamuri yakamirirwa kwenguva refu.
Pazuva rechitatu, takatanga kushanyira Lulu Guya Reindeer Park, iyo inonzi yekupedzisira "dzinza rekuvhima" muChina. Ndiyo chete nyika muChina inomutsa mhembwe. Inosvika paSahuan Ranch masikati, inofamba nesango rebirch, uye inofamba ichipinda muMontenegro manheru kuti inowana kutasva bhiza. Iyo inonakidza, yemabiko emoto wemoto, unakirwe nekuravira kweakakangwa gwai rese, kugara mu yurt, kuona zviitiko zvinonakidza nemaitiro eMongolian.
Pazuva rechina, tichitevedza Rwizi rweErguna rwakatambanudzwa, takafamba tichitevedza muganho weSino neRussia. Nzvimbo dzinoyevedza munzira dzakaderedza kumanikidzwa kwevashandi. Masango makuru ehuswa akawedzera chifuva uye akasimbisa kubatana kwedu. Manheru MuManzhouli, nakidzwa neakanaka ezuva rekunze zviitiko.
Pazuva rechishanu, akashanyira makwikwi evahosi murudzi rweMongolian rweBalhu, ndokupedzisa manheru manheru.
Kuburikidza neichi chiitiko cheboka rekuvaka, kubatana kwevashandi pamwe nehunyanzvi hwekuita basa kwakadzamiswa, uye kutaurirana kwakadzikama pakati pavo kwakasimbiswa. Kunzwisisana kwakawedzeredzwa, manzwiro akaunzwa padhuze, uye munhu wese akanyudzwa munzvimbo iri nani uye nechido chepamusoro. Mubasa remangwana, isu takasimbisa kuvimba kwedu uye kutsunga kusimbisa Hebei Temet.